Iyo Apple Watch inogona kuona kana tiri kunyura | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inogona kuona kana isu tiri kunyura
Nanhasi, hapana munhu asina chokwadi nazvo iyo Apple Watch ndiyo yakanakisa smartwatch iyo yatinogona kuwana pamusika nhasi, tichitenda zvese kune dhizaini yayo uye maficha ayo uye mabasa anotarisana nehutano, kuchengetedzeka uye kugara zvakanaka kwevashandisi nekutenda kune yekurovera moyo sensor, zvisina kujairika moyo chiyero chenjedzo, kudonha detector ...
Mazuva mashoma apfuura, takaburitsa chinyorwa chakaratidza kuti Apple inogona kushandisa tekinoroji inodikanwa kuti ione kana mushandisi ave kuda vane kutya kwekutya. Nhasi tiri kutaura nezve rimwe basa rinonakidza rinogona kuuya kuApple Watch, basa rakapihwa patent neApple uye inoratidza hurongwa hwe ona kana mushandisi ari kunyura.
Vanhu veC Cupertino vaisa chikumbiro chitsva che patent kuUnited States Patent uye neTrademark Hofisi, patent inotsanangura pfungwa ye sarudza kana mushandisi wewatchwatch ari kunyura. Zvinoenderana neiri patent, Apple yaizobatanidza sensor nyowani muApple Watch iyo yaigona kuona huwandu hwemvura munzvimbo, kugona kuona kana takamira takamira, kana iri mvura yemvura, kana tisina kuwira mugungwa, kupinda mudziva ...
Iyi patent inotaura nezve sensor inogona kuona mutsauko pakati pehuwandu hwemvura. Uye zvakare, zvinotora ruzivo kubva kukarenda yedu kuti tione kana isu taronga kuenda kudhibha kana kushambira pane ajenda kuburikidza ne "inotarisirwa mamiriro ekushandisa". Iyi sensor inogona zvakare kugona kuona hunhu hwemvura, pamwe nekuwanda kwayo kana huturu. Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, zvaizoshandisawo chinzvimbo chemushandisi kutarisa kana mushandisi ari murwizi, dziva, nyanza, gungwa kuona matanho anotevera.
Nedatha iyi yese, Apple Watch inogona sarudza kana mushandisi akachengeteka. Kana iyi isiri iyo kesi, yaigona kufonera kune vepedyo emergency services vachivatumira nzvimbo yemushandisi. Sekuona kwedu, pane zvinhu zvakawanda izvo chimbo chinofanira kuongorora kuitira kuti tisvike pamhedziso yakajeka yekuti mushandisi ari kunyura.
Kuva patent, hazvireve kuti pane imwe nguva basa iri rinogona kuona mwenje, asi zvirinani kunakidza kuona kuti Apple inoramba ichishanda sei mukuvandudza mashandiro ainotipa kuburikidza neApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Apple Watch inogona kuona kana isu tiri kunyura
Apple inogona kuburitsa mahedhifoni e-nzeve gore rino
Yekutanga Apple Store kunze kweChina kuvhurwa iri muSeoul